ကိုယ်ရယ် * မမိုးရယ် * ကိုဇော်ရယ် *** – Grab Love Story
by phyu June 20, 2021
ပြီးခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်က ရန်ကုန်က ကုမ္ပဏီတခုမှာ အလုပ်ရတယ်..။ ဝန်ထမ်းအသစ်ဆိုတော့ ဘယ်ကစလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ လူဟောင်းတွေကလည်း ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် ဆိုတော့ ကိုယ့်ကို ကူညီဖို့နေနေသာ သူတို့ဟာသူတို့တောင် မအားဘူး။ အဲဒီမှာ ကိုယ်နဲ့ ရွယ်တူ.. ရာထူးတူလူတယောက်က အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ တော်တော်များများ ကူညီပေးတယ်။ ကိုယ်က နယ်ကလာတာဆိုတော့ လှည်းတန်းမှာ အဆောင်ငှားနေတယ်။ အကူအညီပေးတဲ့ တရုံးတည်းသားက ကိုဇော်လို့ခေါ်တယ်။ ကိုဇော်က သမိုင်းမှာ နေတယ်။ သူက အိမ်ထောင်ကျတာတစ်နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။
သူတို့လင်မယား ၂ယောက်ထဲ တိုက်ခန်းတခန်းမှာ နေကြတာပေါ့။ သူ့မိန်းမက လုံးကြီးပေါက်လှ။ ခါးသေးရင်ချီပြီး မျက်မှန်လေးနဲ့။ စကားပြောရင် လေသံလေးနဲ့ ဖြေးဖြေးလေးပြောတတ်တယ်။
ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲက ကိုဇော်က သဘောကောင်းတော့ ညီအကိုလို သူငယ်ချင်းအရင်းလို ၃လ ၄လလောက်အတွင်း တော်တ်ာရင်းနီးလာတယ်။
ရင်းနီးလာတော့ ထုံးစံအတိုင်း စနေ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ ဘီယာလေး အရက်လေး အတူတူသောက်ဖြစ်ကြတာပေါ့လေ။ ကိုယ်က အဆောင်ငှားနေရတာဆိုတော့ သောက်ဖြစ်ရင် ကိုဇော့်တိုက်ခန်းမှာပဲ ဧည့်ခန်းမှာ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်ထိုင်သောက်ကြတယ်။ ဆိုင်တွေဘာတွေ သိပ်မထိုင်ဖြစ်ကြဘူး။ ကိုဇော့်မိန်းမကလည်း လိုအပ်တဲ့အမြည်းတွေဘာတွေလုပ်ပေးတယ်။ တခါတလေ သူ့အတွက် ဝိုင် လေး ဘာလေးဝယ်ပြီး သူကလည်း ကိုယ်တို့ဝိုင်းမှာ ဝင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုနေလာတာ တစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီ။ သူတို့လင်မယားကလည်း ကလေးမရှိတော့ သူတို့အိမ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စားအိမ် သောက်အိမ်လို မကြာခဏသွားဖြစ်တယ်။ အဲဒီအထိ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာလည်း ကိုဇော်တို့လင်မယားကို ကိုယ့်အမျိုးတွေလိုပဲ သဘောထားရှိမိတယ်။
တရက်မှာတော့ ကိုဇော့်မိန်းမက သူ့သူငယ်ချင်းတွေလာခေါ်လို့ အပြင်သွားတယ်။ ကိုဇော်နဲ့ကိုယ် ၂ယောက်ထဲ ဧည့်ခန်းမှာ ဘီယာထိုင်သောက်နေကြရင်း ရောက်တတ်ရာရာ စကားပြောနေခဲ့ကြတယ်။ ကိုယ်က အမှတ်မထင်…
“ကိုဇော်ရာ ခင်ဗျားတို့ အိမ်ထောင်ကျတာ ၂နှစ်လောက်ရှိနေပြီ ခုထိ ဘာလို့ကလေးမယူသေးတာလဲ” ဆိုတော့
“မသိပါဘူး ကိုသီဟရာ ဆရာဝန်နဲ့လည်း ပြကြည့်တာ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှာမှ ချို့ယွင်းချက် မရှိဘူးပြောတာပဲ။ ရချိန်မတန်သေးလို့နေမှာပါ” တဲ့။
ကိုယ်က ”အေးဗျာ.. ကိုဇော်က မကြိုးစားဘူးလား ကိုဇော့်မိန်းမက ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်းလှ ရုပ်ကလည်း ချစ်စရာလေးပါ ကိုဇော် အားနည်းနည်းစိုက်လိုက်ရင် ကလေးရမှာပါ”
လို့ ကိုယ်က ကိုဇော့်ကို စ လိုက်ပါတယ်။ ကိုဇော်က နည်းနည်းတွေသွားတယ်။ တခုခုကို စဉ်းစားသလိုလုပ်နေရင်း….
“အမှန်အတိုင်းပြောရရင် တပတ်မှာ ၃ရက်လောက် အတူနေဖြစ်တယ်ဗျ..။ နေဖြစ်တိုင်းလည်း သူရော ကျနော်ပါ စိတ်ပါလက်ပါနေဖြစ်ကြတယ်။ ဒါတောင် ဘာလို့မရတာလဲမသိပါဘူးဗျာ..” တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီအကြောင်းစကားစပြတ်သွားပြီး ၂ယောက်သားတခြားအကြောင်းတွေပြောရင်း ဆက်သောက်နေကြတာပေါ့။ ညကလည်း တဖြည်းဖြည်းနက်လာတယ်။ အပြင်မှာ မိုးတွေကလည်း သည်းကြီးမည်းကြီးရွာနေတယ်။ ကိုယ့်ရှေ့က ဘီယာခွက်ကို ၂ယောက်သား ကိုယ်စီသောက်နေရင်း စကားဝိုင်းက ငြိမ်သွားတယ်။ ကိုယ်က အဲလိုကြီးငြိမ်သွားတာ မကြိုက်တော့…
“ကိုဇော် မမိုး အပြင်သွားတာတော်တော်မိုးချုပ်နေပြီ ပြန်လည်း မလာသေးပါလား”
“သူလည်း တခါတလေမှ အပြင်ထွက်ရတာဆိုတော့ အားရအောင် လည်တာနေမှာပေါ့ဗျာ.. သူ့ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ စိတ်ချရပါတယ် ..” တဲ့။
ပြီးတော့ သူက ဆက်ပြောတယ်။
“ကိုသီဟ ကျနော့်မိန်းမကို ဘယ်လိုမြင်လဲ” တဲ့။
ကိုယ်ကလည်း”မမိုးကအေးတယ်.. အိမ်ထောင်မှု နိုင်နင်းပြီး သာမန်ရွက်ကြမ်းရေကျိုထက်သာတဲ့ ရုပ်ရည်ရှိတယ်.. ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားလည်း လှတယ်ဗျာ”
“ခင်ဗျားက သေချာကြည့်ထားတာပဲ ထင်တောင် မထင်ထားဘူး.. ကိုယ်က.. အားနာသွားပြီး”
“ဟာဗျာ.. အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး ခဏခဏမြင်နေရ ဆုံနေရတော့ ဒီလိုပဲ သတိထားမိတာပါ”
လို့ ပြန်ပြောလိုက်ရတာပေါ့။ ကိုဇော်က..
“ကဲဗျာ.. ကိုသီဟ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးကြည့်မယ် ခင်ဗျား.. ကျနော့်မိန်းမနဲ့ မအိပ်ချင်ဘူးလား..” တဲ့။
ကိုယ်ကလည်း ” ဟာ ကိုဇော် ဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲဗျာ.. ကျနော့်ကို ငရဲကြီးအောင် လုပ်နေပြန်ပြီ”
ကိုဇော်က ”ငရဲကြီးတာတွေ သေးတာတွေလုပ်မနေနဲ့ ခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းသာပြော.. ကျနော့်မိန်းမနဲ့ ခင်ဗျား အတူတူနေချင်သလားပဲ ပြောဗျာ..”
ကိုယ့်မှာ သောက်ထားတဲ့ ဘီယာအရှိန်လေး ဘယ်ရောက်သွားလို့ သွားမှန်းမသိအောင် ရှိန်းဖိန်းလာပြီး…
“အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်တော့ မမိုးလို မိန်းကလေးမျိုးနဲ့ ကျနော်အတူနေချင်တာပေါ့ ကိုဇော်ရာ”
လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ကိုဇော်က…
“ဟုတ်ပြီ ဒါဆို ဒီည ခင်ဗျား အဆောင်မပြန်နဲ့တော့ အိမ်မှာပဲ အိပ်လိုက်။ မိန်းမပြန်လာရင် ကျနော်က အရမ်းမူးချင်ယောင်ဆောင်နေမယ်… ခင်ဗျားအစွမ်းအစကို ကြည့်မယ်။ ခင်ဗျား ကျနော့်မိန်းမကို ဒီနေ့ည ရအောင် ဆွဲဆောင်ဗျာ..။ ကျနော်မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးမယ်”
ကိုယ်က ”ဟာ ကိုဇော်ရာ သင့်တော်ပါ့မလားဗျာ.. မကောင်းပါဘူးဗျာ.. ကျနော်က လူပျိုဆိုပေမယ့် အဲလိုကြီးလုပ်လို့ အဆင်ပြေပါ့မလား.. ကိုဇော်တို့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဖုအထစ်ဖြစ်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.. ကျနော်မလုပ်ပါရစေနဲ့ဗျာ..”
“ဘာမှမပူနဲ့ ခင်ဗျားကူညီရင် ကျနော်တို့အိမ်ထောင်ရေး ပိုလို့တောင် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်.. ခင်ဗျားအနေနဲ့သာ ကျနော်မူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အိပ်ပျော်သလို လုပ်နေတုန်း ကျနော့်မိန်းမကို ရအောင်နှူးပေး .. ဟုတ်ပြီလား.. ကျန်တာဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့… ဘယ်လိုလဲ လုပ်နိုင်ပါ့မလား”
ကိုယ်က ဘာပြန်ဖြေလို့ဖြေရမှန်းမသိခင် အိမ်ရှေ့တခါးဖွင့်သံကြားလိုက်ရတယ်။ မမိုးပြန်လာတာဖြစ်မှာပဲ။ ကိုဇော်က…
“ကဲ ကိုယ့်လူ ကျနော့်မိန်းမတော့ ပြန်လာပြီ.. လှုပ်ရှားပေတော့.. ကျနော်မူးချင်ယောင်ဆောင်တော့မယ်.. ကျန်တာ ခင်ဗျားအစွမ်းအစနဲ့ခင်ဗျားပဲ”
ဒီလိုနဲ့ မမိုးလည်း ဧည့်ခန်းထဲရောက်တော့..
“ဟောတော့ ကိုသီဟ မပြန်ရသေးဘူးလား.. ဟင် ကိုဇော်လည်း တော်တော်မူးနေပါပေါ့လား ဒီနေ့သောက်တာ များသွားပြီထင်တယ်.. ကျမလည်း မိုးက အရမ်းသည်းတော့ ထီးဆောင်းတာတောင် မလုံလို့ တကိုယ်လုံး စိုရွှဲနေတာ အဝတ်အစား လည်းလိုက်ဦးမယ်.. ကျမ အဝတ်အစားလည်းပြီးရင် ကိုဇော့်ကို အိပ်ယာထဲ ကိုသီဟကူပြီး လိုက်ပို့ပေးပါဦးနော်”
လို့ ပြောပြီး နောက်ဖေးကို ထွက်သွားတယ်။
ကိုယ့်မှာ မမိုးရဲ့ရေစိုနေတဲ့ နောက်ပိုင်းအလှကို ငေးကြည့်ရင်း အာခေါင်တွေခြောက်လာတယ်..။ ကိုဇော်ပြောသလိုလုပ်သင့် မလုပ်သင့်ကလည်း စိတ်ထဲမှာ လွန်ဆွဲနေတယ်လေ… မမိုးလည်း နောက်ဖေးရောက်လောက်တဲ့အချိန်လောက်မှာ ကိုဇော်က ဝူးဝူးဝါးဝါး ထအော်ပါတယ်။ ကိုယ်လည်း ရုတ်တရက်ဆိုတော့ လန့်သွားတယ်။
ကိုဇော်မူးချင်ယောင်ဆောင်ရင်း တကယ်များ မူးသွားတာလားလို့ပေါ့။ ကိုဇော်က ဝူးဝူးဝါးဝါးလုပ်ပြီး ထိုင်ခုံတွေဆွဲရမ်း အတင်းသောင်းကျန်းနေတော့ မမိုးက နောက်ဖေးကနေ ပြေးထွက်လာပါတယ်။ အဝတ်အစားလဲလက်စမို့ အပေါ်အင်္ကျီကတော့ ချွတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီး ရေစိုထမီကမလဲရသေးဘဲ ရင်လျားနဲ့ထွက်လာတာပါ။ ကိုယ်နဲ့ မမိုး ၂ယောက်သား ကိုဇော့်ကို အတင်းဝင်ထိန်းရပါတော့တယ်။ ကိုဇော်ကလည်း တကယ့်အမူးလွန်နေတဲ့ အမူးသမားတယောက်လို ဘယ်လိုမှ ထိန်းမရအောင် ယိမ်းထိုးပြီး သောင်းကျန်းနေပါတော့တယ်။ မမိုးက..
“ကိုသီဟရေ ကိုဇော့်ကို အိပ်ယာထဲ လိုက်ပို့ပေးရအောင် လုပ်ပါဦး”
လို့ပြောလာပါတယ်။ မမိုးနဲ့ကိုယ် ၂ယောက်သား ကိုဇော့်ကို တဖက်တချက်က ထိန်းရင်း သူတို့အိပ်ခန်းထဲ ရောက်လာပါတယ်။ အိပ်ခန်းထဲမှာ ကုတင်မရှိဘူး။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ၂ယောက်အိပ် စပရိန်မွေ့ယာကို ခင်းထားပြီး မီးမှိန်မှိန်လေး ထွန်းထားတယ်။ ဘာနံ့မှန်းမသိတဲ့ အမွှေးနံ့တမျိုးကလည်း အခန်းထဲမှာ သင်းသင်းလေးမွှေးနေတယ်။ အိပ်ခန်းအနေအထားကို ကြည့်မိတော့ မမိုးက အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းပီသစွား သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေတတ်တာကို ပိုပြီး သတိထားမိလာတယ်။ အခန်းကို အကဲခတ်နေတာနဲ့ ခဏတုန့်ဆိုင်းသလိုဖြစ်နေတော့ မမိုးက…
“ကိုသီဟ ဘာလို့ရပ်နေတာလဲ ကိုဇော့်ကို အိပ်ယာပေါ် လှဲပေးလိုက်တော့မယ်လေ”
လို့ပြောလာတော့မှ သတိဝင်သလိုဖြစ်လာတယ်။ အသာအယာလေး အိပ်ယာပေါ် လှဲချပေးဖို့ ကြံနေတုန်း ဖြုန်းဆို ကိုဇော်က လှဲချလိုက်တာ သုံးယောက်သား လုံးထွေးပြီး မွေ့ယာပေါ် ကျသွားပါတယ်။ မမိုးက ဟန်ချက်ပျက်ပြီး မထိန်းနိုင်တော့ပဲ လည်ထွက်ပြီး ဆွဲမိဆွဲရာ ဆွဲလိုက်တာ ကိုယ့်ပုဆိုးခါးပုံစကို ဆွဲချွတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားပြီး ပုဆိုးက ပေါင်လည်လောက်ထိလျောကျသွားတယ်။ ကိုဇော်က တမင်ဆွဲလိုက်သလား တကယ်ပဲ မတော်တဆဆွဲချွတ်လိုက်မိသလားတော့ မသိဘူး မမိုးရင်လျားထားတဲ့ထမီကို သူ့လက်က ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။
မွေ့ယာပေါ်မှာတော့ ကိုယ်နဲ့ကိုဇော်က ပက်လက်လှန်ကျနေပြီး မမိုးက ပြေလျော့နေတဲ့ ထမီနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုဇော့်ကြားမှာ လေးဘက်ထောက်ရက် လဲကျနေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုဇော်က မွေ့ယာပေါ်ကနေ ဆတ်ကနဲလှိမ့်ချလိုက်တော့ လေးဘက်ထောက်ရက်သားဖြစ်နေတဲ့မမိုးက ဟန်ချက်ပျက်ပြီး ကိုယ့်ဘက်ကို ယိုင်ကျလာတယ်။ ကိုဇော်က မွေ့ယာအောက်ထိ ဆက်လှိမ်ချလိုက်တော့ မွေ့ယာပေါ်မှာ ထမီခါးလည်လောက်ရောက်နေတဲ့မမိုးနဲ့ ပုဆိုးကပေါင်လည်လောက်ထိကျွတ်နေတဲ့ ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက် ဆွဲမိဆွဲရာဆွဲရင်း တစောင်းအနေအထားနဲ့ တယောက်လက်မောင်းကို တယောက် ကိုင်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ အဖြစ်အပျက်ကအရမ်းမြန်တော့ မွေ့ယာပေါ်မှာ အပေါ်ပိုင်း ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်နေတဲ့မမိုးနဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ အောက်ခံဘောင်းဘီပေါ်တဲ့အထိ ပုဆိုးကျွတ်နေတဲ့ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်သား ဘေးတစောင်းအိပ်ရက်အနေအထားနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး ကြောင်ကြည့်နေကြမိတယ်။
ကိုယ့်မှာ မမိုးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေတော့ တမျိုးဖြစ်နေလို့ အကြည့်လွှဲလိုက်ရာက မမိုးရဲ့ရင်သားကို အမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်ပေမယ့် ကလေးမရသေးတော့ ထိပ်ပိုင်းမချွန့်တချွန်လေးရှိတဲ့ တင်းတင်းရင်းရင်း မို့မို့မောက်မောက်ပုံသဏ္ဍာန်က ကိုယ့်ရင်ခုန်သံတွေကို တော်တော်လေး မြန်လာစေခဲ့တယ်။ ကိုယ်က မျက်နှာလွှဲလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ မမိုးက ခေါင်းကို ငုံ့လိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်လုံးမှာ အားတွေမရှိတော့သလိုဖြစ်နေပြီး လက်မောင်းချင်းကိုင်ထားတာကို အခုထိ လွှတ်လိုက်ဖို့ မစဉ်းစားမိကြဘဲ ပိုပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆုပ်ကိုင်ထားမိနေကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မမိုးက..
ကိုသီဟ ကျမဘာလို့လဲမသိဘူး ရင်တွေ အရမ်းခုန်တာပဲ…ရှင်…” တဲ့..။
လေသံလေးနဲ့တိုးတိုးလေး ပြောလာတယ်။ ကိုယ်က..
လို့ပြန်ပြောတယ်။ အဲဒီအချိန်ထိ တယောက်လက်မောင်းကို တယောက်က ကိုင်ထားနေကြတုန်းပဲ။ ကိုယ့်မှာ မမိုးရဲ့ တင်းရင်းလုံးဝန်းတဲ့ နို့လေးကို ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ကိုင်ကြည့်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး လက်တဖက်က မမိုးလက်မောင်းကို ထိန်းရင်း နောက်တဖက်နဲ့ သူ့ရဲ့ရင်သားကို အသာယာလေး ဆုပ်ကိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ တိုင်ပင်ထားသလိုပဲ မမိုးရဲ့ လက်တဖက်က ကိုယ့်လက်မောင်းကို ဆက်ကိုင်ထားပြီး နောက်လက်တဖက်က ကိုယ့် အောက်ခံဘောင်းဘီအောက်က ဖောင်းကြွနေတဲ့ နေရာကို သူ့လက်ကရောက်လာတယ်။ တကယ့်ကို တပြိုင်နက် အချိန်ကိုက် ပြိုင်တူလှုပ်ရှားလိုက်မိကြတာ,ညှိထားသလိုပါပဲဗျာ။ ကိုယ်က လက်တဖက်ထဲနဲ့ သူ့ရင်သား၂ဖက်စလုံးကို ခပ်ဖွဖွလေးဆုပ်ပေးရင်း တချက်တချက် လက်ညှိုးနဲ့လက်မကိုသုံးပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကို အသာလေး ပွတ်ချေပေးလိုက် လုပ်နေချိန် သူကလည်း ကိုယ့်ရဲ့အောက်ခံ ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ အသာအယာ ပွတ်သပ်နေတာ။ အဲလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်အထိ ပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့ ရင်တွေအရမ်းခုန်တာပဲရှင်.. ဆိုတဲ့စကားကလွဲလို့မမိုးဆီက ဘာသံမှ ထွက်မလာသေးသလို ကိုယ်ကလည်း ဘာမှ မပြောမိသေးဘူး။
စကားလုံးတွေသုံးစရာမလိုလောက်အောင်လည်း တယောက်နဲ့တယောက် နားလည်နေမိသလို ခံစားနေရတယ်။ ဒီအချိန်မှာ စကားလုံးတွေနဲ့ ဖွဲ့နွဲ့ပြီးပြောနေစရာမလိုတဲ့ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု နားလည်မှုတွေကို မမိုးနဲ့ကိုယ် အလိုလိုသိရှိခံစားနေရတယ်။ အဲဒီလိုနေနေကြရင်း မမိုးက ကိုယ့်လက်မောင်းကို ကိုင်ထားတဲ့လက်ကို လွှတ်လိုက်ပြီး ကိုယ့်ခေါင်းအောက်ကို သူ့လက်ကို လျှိုပြီး ကိုယ့်ကိုဖက်လိုက်တယ်။ ကျန်တဲ့လက်တဖက်က ကိုင်တွယ် ပွတ်သတ်နေတာကိုလည်း မရပ်လိုက်ဘူး။ အဲလိုလုပ်လိုက်တော့ ကိုယ့်မျက်နှာက အလိုလို သူ့ရင်ခွင်ထဲရောက်သွားပြီး သူ့နို့နှစ်မွှာကြားမှာ မျက်နှာအပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။
အလိုက်တသိနဲ့ပဲ သူ့နို့တလုံးကို ဖွဖွလေး ငုံပေးထားလိုက်ရင်း နို့သီးခေါင်းလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ တို့ တို့ ပြီးကစားပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ မမိုးရဲ့လက်နှစ်ဖက်က ကိုယ့် နားရွက် ၂ဖက်ကို အုပ်ကိုင်လိုက် ကိုယ့်ဆံပင်တွေကြားထဲကို သူ့လက်ချောင်းလေးတွေ ထိုးသွင်းရင်း ဖွပေးလိုက်နဲ့ ကိုယ် သူ့ကို နို့စို့ပေးနေတာကို ဇိမ်ခံနေတယ်။ ကိုယ့်မှာလည်း သူ့နို့ကို တဖက်တချက် တလှည့်စီ စို့ပေးရင်း လက်နဲ့ နို့အောက်ခြေပိုင်းကနေစုပြီး အသာအယာလေး နယ်ပေးနေမိတယ်။
တော်တော်လေးကြာတော့ မမိုးကို ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့အရသာ ခံစားစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ နို့စို့နေရာကနေ အောက်ပိုင်းကို တဖြေးဖြေးချင်း ဆင်းပြီး သူ့ရဲ့ ချက် ကလေးထဲကို လျှာနဲ့ ထိုးမွှေကစားပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်က သူ့အောက်ပိုင်းကိုပါ ပါးစပ်နဲ့ကစားပေးဖို့ပေါ့။ အဲဒါကို မမိုးက သိပုံရပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အပေါ်ပြန်ဆွဲခေါ်ပြီး ပါးစပ်ချင်းတေ့လို့ အရစပ် အနမ်းမိုးတွေ ခြွေတော့တယ်။ လျှာနှစ်ခုအပြန်အလှန် တွန်းတိုက်နေချိန်မှာ ရင်ခုန်သံတွေ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ နှစ်ယောက်သား ပြုတ်ထွက်သွားမှာကို စိုးရိမ်နေတဲ့အတိုင်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်ထားမိတယ်။ ရင်ဘတ်မှာ ထိတွေ့နေတဲ့ မမိုးရဲ့ တင်းရင်းထွားကြိုင်းတဲ့ နို့အုံရဲ့အထိအတွေ့ရယ်.. ကိုယ့်မျက်နှာတခုလုံးကို နေရာအနှံ့အားရပါးရ အနမ်းချွေလိုက်.. ပါးစပ်ချင်းအငမ်းမရ စုပ်နမ်းလိုက်လုပ်နေတဲ့ မမိုးရဲ့အမူအရာ အပြုအမူတွေဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ အထူးတဆန်းဖြစ်နေမိတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့အောက်ပိုင်းလေးကို အနမ်းပေးဖို့လုပ်တာကို လက်မခံဘဲ ကိုယ့်ခေါင်းကို ဘာလို့ အပေါ်ကို အတင်းဆွဲပြီး အငမ်းမရအနမ်းခြွေတာကိုလည်း နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေရတယ်။
မမိုးက တော်တော်ကြာကြာ သူကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး အနမ်းတွေခြွေနေရာက ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ပြီး..တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်ထားတာကိုမလွှတ်သေးပဲ သူ့ထုံးစံအတိုင်း လေသံတိုးတိုးလေးနဲ့ ကိုယ့်နား နားကိုကပ်ပြီး..
“ကိုသီဟ ခုနက ကိုသီဟ ကျမကိုပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပေးမလို့မဟုတ်လား”တဲ့..။
ကိုယ်က ခေါင်းငြိမ့်လိုက်ပြီး ဝန်ခံလိုက်တော့။
“မမိုးသိတယ်.. ဒါပေမယ့် ကိုသီဟလုပ်မပေးခင် မမိုးက ကိုသီဟ ပါးစပ်နဲ့ အရင်လုပ်ပေးချင်လို့ ကိုသီဟကို အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တာ..။ မမိုးလုပ်ပေးပြီးမှ ကိုသီဟ လုပ်ပေးနော် ”
တဲ့ဗျာ။ ပြီးတော့ သူက ဖက်ထားတာကို လွှတ်ပြီး ဒူးတုတ်ထိုင်လိုက်တယ်။ ကိုယ်လည်းယောင်ပြီး သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် ဒူးတုတ်ထိုင်လိုက်မိတယ်။ အဲဒီမှာ သူက ကျွတ်လုကျွတ်ခင်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်ပုဆိုးကို ကိုယ့်အတွင်းခံနဲ့အတူရောပြီး ချွတ်ပေးတယ်။ ကိုယ်က လူပျိုဆိုပေမယ့် လိင် ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ အစိမ်းသက်သက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရည်းစား ၃ယောက်လောက် ထားဖူးပြီး အတူလည်း နေဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု မမိုးနဲ့တွေ့တော့ အယောင်ယောင် အမှားမှားတွေ ဖြစ်လို့ တကယ့်လူပျိုပေါက်လေးလို ဖြစ်နေရတယ်။ မမိုးက သူဝတ်ထားတဲ့ ထမီကိုလည်း ခွှတ်လိုက်တော့ ပကတိ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်းဖြစ်သွားပြီး သူ့ခန္ဓာကိုယ်အလှကလည်း ကိုယ်ထင်ထားတာထက် အများကြီးပိုလှတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူက ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်သွားတော့ ကိုယ်လည်း အားကျမခံ ကိုယ့်အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်တယ်။
၂ယောက်စလုံး အဝတ်အစားမပါတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေကို အပြန်အလှန်ကြည့်ရင်း ဘာအဓိပ္ပာယ်မှန်မသိဘဲ ပြိုင်တူ ရယ်လိုက်မိကြတယ်။ မမိုးက ဂုတ်ဝဲလောက်ရှိတဲ့ သူ့ဆံပင်တွေကို နောက်ကို စုပို့လိုက်တဲ့ဟန်လေးကို ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေတုန်း သူ့ လက်နဲ့ ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို အသာတွန်းလိုက်တာ ကိုယ်လည်နောက်ကို ပက်လက်လန်ကျသွားတယ်။ ကျောနဲ့ မွေ့ယာနဲ့အထိ ကိုယ့်လိင်ချောင်းမှာ. ပူပူနွေးနွေးနဲ့နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့ရလိုက်တယ်။ မမိုးရဲ့ လျှာက အထက်အောက်စုန်ဆန်ရင်း ယက်ပေးတဲ့အတွေ့..။ တခါတခါ ဇိုးကနဲဇတ်ကနဲ့ ပါးစပ်ထဲသွင်းရင်း လျှာဖျားလေးနဲ့ ကစားသွားတွေက ကိုယ့်ရင်ကို ဗြောင်းဆန်စေတယ်။
ပက်လက်အိပ်နေရာကနေ ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ့်ပေါင်ကြားမှာ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပြီး အားရပါးရ ပုလွေပေးနေတဲ့ မမိုးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားက အင်မတန်လှပတဲ့ ပန်းချီကားတချပ်လိုပဲ။ တင်ပါးထွားထွားကြီးကို ကော့ကော့ပြီး ပါးစပ်ကနေ ကိုယ့်လိင်ချောင်းကို အရသာမျိုးစုံပေးရင်း လှုပ်ရှားနေတဲ့ မမိုးရဲ့အမူအရာကလည်း ညက်ညောင်းတဲ့ကကြိုးနဲ့ ကနေတဲ့ ကချေသည်လေးလိုပါပဲ။
တကယ့်စည်းစိမ်ကို ခံစားနေရလို့ ကိုယ့်မှာ တချက်ချက်မျက်လုံးလေးတွေ မှေးစင်းသွားလိုက် မမိုးရဲ့ကုန်းပြီးပုလွေပေးနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မျက်စိအရသာခံလိုက်လုပ်နေတုန်း မမိုးရဲ့နောက်ကနေ မထင်မှတ်တဲ့ အရိပ်တခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်..။ မမိုးကတော့ လေးဘက်ထောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုအားရပါးရ စုပ်နေတော့ မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်မှာက ကိုယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်ရတော့ ရုတ်တရက်လန့်သွားတယ်။
သူက ဘယ်သူလည်းဆိုတော့ ခုနက မမိုးရဲ့ အထိအတွေ့တွေကြောင့် ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်တွေ ဝေဝါးနေချိန်… ကိုယ်ခဏမေ့နေတဲ့… အမူးလွန်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ ကိုဇော့်ကို မတ်တပ်ရပ်ရက်တွေ့လိုက်ရတယ်…။ မမိုးကတော့ သူ့အာရုံနဲ့သူ… ပြီးတော့ ကျောပေးထားတော့ ဘယ်မြင်ရမလဲ…။ ကိုဇော့်လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတာက……..
ကိုဇော်က သူ့လိင်တန်ကို သူ့ဘာသာသူ မာစတာဘေးရှင်းလုပ်ရင်း မမိုးက ကိုယ့်လိင်တန်ကို မှုတ်လိုက် စုပ်လိုက် လျက်လိုက်လုပ်နေတာကို မျက်စိအရသာခံကြည့်နေတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ် လက်ညျိုးက ပါးစပ်ကို ကန့်လန့်လုပ်ပြီး တိတ်တိတ်နေဆိုတဲ့ အမူအရာပြတယ်။ မမိုးကလည်း ကစားစရာအသစ်အဆန်း ရထားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လို စုန်ချည်ဆန်ချည်နဲ့ ဥတွေပါမကျန်အောင် အကုန်စုပ်ပေးနေတာ။ ပါးစပ်က အလုပ်ရှုပ်နေသလိုပဲ မမိုးရဲ့လက်တွေက ကိုယ့် ပေါင်အတွင်းသားတွေကို ပွတ်သပ်လိုက် ကိုယ့်တင်ပါးတွေကို စုပ်နယ်လိုက်နဲ့ မျက်မှန်အောက်ကမျက်လုံးလေးတွေ မှေးစင်းလာတဲ့အထိ ဇိမ်ယူနေတာ တရစပ်ပဲ။
ကိုယ့်မှာလည်း မမိုးရဲ့အပြုအစုတွေကြောင့်လား… ရှေ့တည့်တည့်က ကိုယ်တို့ကို ကြည့်ရင်း မာစတာဘေးရှင်းလုပ်နေတဲ့ ကိုဇော့်ကြောင့်လား မသိဘူး ရင်ဘတ်ကြီးတခုလုံးပွင့်ထွက်သွားမတတ် တဒိန်းဒိန်းခုန်နေတယ်လေ။
ခဏနေတော့ ကိုဇော်က ဒူးထောက်ပြီး ရှေ့တိုးလာတယ်။ လေးဘက်ထောက်နေတဲ့ မမိုးနောက်ကိုရောက်တော့ သူ့လိင်တန်နဲ့ မမိုး အနောက်ကနေ ထောက်လိုက်တယ်။ အားရပါးရ ပုလွေပေးနေတဲ့ မမိုးက ရုတ်တရက် တွန့်ကနဲ့ ဖြစ်သွားပြီး ကိုယ့်လိင်တန်ကို သူ့ပါးစပ်ကနေ ချွတ်လိုက်တာ ပလောက် လို့ အသံတောင်ထွက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ထုံးစံအတိုင်း လေသံအေးအေးလေးနဲ့..
” ကိုဇော် နိုးလာပြီလား… “
လို့မေးလိုက်တယ်။ ကိုဇော်က ..
” ဆက်လုပ်လေ မိုး ဘာလို့ရပ်လိုက်ရတာလဲ … ” တဲ့။
မမိုးက ” ကိုဇော် မနေနိုင်တော့လို့ လုပ်တော့မလို့လား.. ကိုသီဟ ပြီးမှ လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလား..” တဲ့။
သူတို့လင်မယား နှစ်ယောက် အပြန်အလှန် ပြောတာကို နားထောင်ပြီး ကိုယ့်မှာ ဘာမှ နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မမိုးက ကိုယ့်ပေါင်ကြားမှာ မျက်နှာအပ်ထားရာက ကိုဇော့်ဘက်ကို လှည့်လိုက်တယ်။ ကိုဇော်က ဒူးထောက်ထားတော့ မမိုးမျက်နှာက ကိုဇော့်လိင်တန်နဲ့ တည့်တည့်ပဲ။ နောက်ပြီး ဘယ်လိုမှကိုယ်ထင်မထားတဲ့ စကားသံ မမိုးဆီက ထွက်လာတယ်။
” ကိုသီဟ ကျမ ကိုဇော့်ကို စုပ်ပေးနေတုန်း ကျမကို လုပ်ပေးပါလားရှင်” တဲ့။
ကိုဇော်ကလည်း ” ကဲ ကိုသီဟ ကျနော့်မိန်းမ ကျေနပ်အောင် ခင်ဗျားအစွမ်းကုန် လုပ်ပေးလိုက်စမ်းပါဗျာ.. ” တဲ့။
ကိုယ့်မှာ ကိုယ့်နားတောင် ကိုယ်မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်နေတယ်။ ခုချိန်မှာ သောက်ထားတဲ့ ဘီယာအရှိန်ကလည်း ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်သွားမှန်းမသိတော့ဘူး။ ကိုယ်မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ဖြစ်ပျက်ကုန်ပြီ။ အိပ်မက်လား တကယ်လားလို့တောင်ဝေခွဲမရတော့ဘူး။ မမိုးကတော့ ကိုဇော့်လိင်တန်ကို စပြီး စုပ်နေပြီ။ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာတော့ စွံ့စွံ့ကားကားနဲ့ ပြည့်တင်းနေတဲ့ မမိုးရဲ့ တင်ပါးကြီးရယ်.. တင်ပါးအလည်မှာ ခပ်စူစူလေးလေးဖြစ်နေတဲ့ မမိုးရဲ့စအိုဝလေးရယ်.. အဲဒီစအိုဝလေးအောက်က ဖောင်းပြီး အရည်ရွှန်းလို့ ပြောင်လက်နေတဲ့ မမိုးရဲ့ပစ္စည်းလေးကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
အဲဒီမြင်ကွင်းကြောင့် သွေးခုန်နှုန်းက ရုတ်တရက်မြန်လာပြီး ကိုယ့်လိင်တန်က ဇတ်ကနဲ သွေးတိုးသလိုဖြစ်ပြီး တင်းတောင်လာတော့ ထွေထွေထူးထူးဘာမှ မစဉ်းစားနေတော့ပဲ မမိုးရဲ့ပစ္စည်းအဝကို ကိုယ့်ထိပ်ဖျားနဲ့ အထက်အောက် အစုန်အဆန်ပွတ်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ စိုစွတ်စွတ်အတွေ့ကြောင့် လိင်တန်ပိုပြီးတင်းလာသလို မမိုးရဲ့ပစ္စည်းကလေးကလည်း နည်းနည်းလေး စူပွစူပွဖြစ်လာတာကို ခံစားမိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ
” ထိုးထည့်စရာရှိတာ ထိုးထည့်လိုက်ပါတော့ ကိုသီဟရယ်.. မမိုးအရမ်းခံချင်နေပြီ…”
လို့ ကိုယ်ဘယ်လိုမှထင်မထားတဲ့စကား မမိုးဆီက ကြားလိုက်ရတော့တယ်။ ကိုဇော့်ကို လှမ်းကြည့်တော့ လည်း လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ဆိုတဲ့ အမူအရာမျိုး သူ့မျက်နှာမှာ တွေ့လိုက်ရတယ်လေ။ ဒါနဲ့ကိုယ်လည်း ခါးကို အသာကြွပြီး မမိုးအထဲကို ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းလိုက်တာ တခန်းလုံးမှာ တအင်းအင်း အော်ညည်းနေတဲ့ မမိုးအသံရယ်..။ မမိုးပစ္စည်းထဲကို ကိုယ့်လိင်တန် အသွင်းအထုတ် လုပ်နေတဲ့ ပြွတ်ပြွတ် ပလောက် ပလောက် ဆိုတဲ့အသံကလွဲလို့ တခြားအသံမကြားရလောက်အောင် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ရင်း အရသာကိုယ်စီ ခံစားနေကြမိပါတယ်။ မမိုးခမျာမှာလည်း ညည်းသံလေးပေးလိုက် ကိုဇော့်ကို စုပ်လိုက် ကိုယ့်ကို ဖင်ကော့ပေးလိုက် မနားတမ်းကို ဇယ်ဆက်သလို အလုပ်များနေရပါတယ်။
ကိုယ့်မှာလည်း မမိုးရဲ့ပစ္စည်းက စေးပိုင်ပြီး တချက်ချက် အထဲက စွဲစုပ်ယူသလို ခံစားနေရလို့ ချက်ချင်းကြီး ပြီးမသွားရအောင် ထိန်းထားနေရင်း မမိုး တင်ပါးကြီးကို အားရပါးရကိုင်လို့ လေးငါးဆယ်ချက်လောက် ဆက်တိုက်အမြန်ဆောင့်လိုက်…
ဖြေးဖြေးချင်း အချက် နှစ်ဆယ်လောက် ထိုးသွင်းလိုက်…. ကိုယ့်လိင်တန်ကို အရင်းအထိထိုးသွင်းပြီး မမိုးရဲ့တင်ပါးတွေကို အားပြုလို့ သူ့ပစ္စည်းထဲ ကိုယ့်လိင်တန်စိုက်ထားရင်းက စကောဝိုင်းသလို ဝိုင်းလိုက်…. နောက်ကနေ အမျိုးမျိုးလုပ်ရင်း အားရပါးရ လူ့စည်းစိမ်ကို ခံစားနေမိပါတယ်။
“ကိုသီဟ ခပ်သွက်သွက်လေးဗျ.. မိုး တော်တော်ကောင်းနေပြီ”
အဲလိုပြောလိုက်ပါတယ်။ မမိုးကတော့ စကားသံတောင်မထွက်နိုင်တော့ဘူး.. ညည်းသံသဲ့သဲ့ ညည်းရင်း ကိုဇော့်ကို အားရပါးရ စုပ်ပေးနေပါတယ်။ ကိုယ့်မှာလည်း မမိုးရဲ့ ပစ္စည်းအတွင်းပိုင်းက ညှစ်နေတဲ့ ရုန်းအားကြောင့်ရယ်… တရစပ်ခပ်မြန်မြန်လေး ဆောင့်နေတဲ့ ဆောင့်ချက်တွေကြောင့်ရယ် ကြာရှည်ထိန်းမထားနိုင်တော့ဘဲ စိတ်ကို လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ မမိုးရဲ့ အတွင်းထဲကို ပန်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ တချိန်ထည်းမှာ မမိုးရဲ့ပစ္စည်းထဲကနေ ကိုယ့်ဆီက ရှိသမျှအားအင်တွေအကုန်စုပ်ယူလိုက်သလို ခံစားလိုက်ရတာပဲ။ မမိုးကလည်း ကိုဇော့်တင်ပါးနှစ်ဘက်လုံးကို အားရပါးရကုတ်ခြစ်ပြီး တဟင်းဟင်းအသံထွက်လို့ တွန့်လိမ်ကော့ပြီး ငြိမ်ကျသွားပါတယ်။
မှောက်ရက်သားကြီးငြိမ်ကျသွားတဲ့ မမိုးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတော့ ကိုဇော် ပန်းထုတ်လိုက်တဲ့ သုတ်ရည်တွေ ရွှဲရွဲစိုနေပါတယ်။ ကိုယ့်လည်း မမိုးရဲ့ပေါင်ကြားမှာမှောက်ရက်နေရင်း မမိုးတင်ပါးကြီးပေါ် ခေါင်းအုံးအိပ်ပြီး အနားယူနေရပါတယ်။ ကိုဇော်ကတော့ မွေ့ယာဘေးမှာ ပက်လက်လှန်ပြီး မမိုးမျက်နှာကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီး ပြုံးယောင်ယောင်လေးနဲ့ နားနေတယ်။ ခဏနေတော့ ကိုဇော်က
“ကဲ ရေလေးဘာလေးချိုးကြဦးစို့ နှစ်ယောက်စလုံးထကြလေ ” တဲ့..။
ကိုဇော့်အသံကြားမှ ကိုယ်နဲ့မမိုးလည်း သတိဝင်သလိုဖြစ်လာပြီး ထလာပါတယ်။ သုံးယောက်သား ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီး တိုင်ပင်ထားသလိုပဲ ဘာရယ်မဟုတ် ရယ်လိုက်ကြပါတယ်။ ကိုယ်က ..
” သုံးယောက်စလုံး အတူတူရေချိုးမှာလားဗျ”
လို့မေးလိုက်တော့ ကိုဇော်က …
” ဟုတ်တယ်လေ တူတူချိုးကြတာပေါ့” တဲ့။
အဲဒါနဲ့ မမိုးကို အလယ်ကထားပြီး ကိုယ်နဲ့ကိုဇော်က ဘေးတဖက်တချက်ကနေ မမိုးကိုဖက်လို့ ရေချိုးခန်းဆီ သွားကြတယ်။ ရေချိုးခန်းထဲရောက်တော့ ရေပန်းဖွင့်ပြီး သုံးယောက်သား တယောက်တလှည့်စီ ချေးတွန်းပေးကြ.. ဆပ်ပြာတိုက်ပေးကြ လုပ်ကြတယ်။ စကားတော့ ဘာမှမပြောမိကြဘူး..။ တစုံတရာက ခိုင်းလို့ လိုက်လုပ်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲ အလိုအလျောက် လုပ်နေမိကြတယ်။ ဆပ်ပြာတိုက်လို့လဲပြီးရော ကိုယ်နဲ့ကိုဇော်က မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်။ မမိုးကတော့ ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်မှာ ဒူးတုပ်ရက်လေး ထိုင်နေတုန်းပဲ။ သူ့လက်နှစ်ဖက်က ကိုယ်နဲ့ကိုဇော့်တို့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကိုင်ထားတယ်။ သူ့ပုံစံက နှစ်ယောက်စလုံးကို မှုတ်ပေးချင်သေးတဲ့ပုံပဲ။
ကိုယ်က ကိုဇော့်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကိုဇော်က ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်။ ဘာအဓိပ္ပါယ်နဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ပြသလဲတော့ မသိဘူး… ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ပစ္စည်းကတော့ အသင့်အနေအထားကိုရောက်လာနေပြီ..။ မမိုးက မျက်လုံးလေးမှေးစင်းပြီး ကို့ပစ္စည်းကို အကုန်လုံးဝင်သွားအောင် အသာလေးငုံလိုက်တယ်။ Deep Throat ပုံစံမျိုးပေါ့.. ကိုယ့်မှာ ခါးကို ကော့သွားတာပဲ။ တချိန်ထဲမှာ မမိုးက ကိုဇော့်ပစ္စည်းကို ဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်။ ကိုယ့်ပစ္စည်းတချောင်းလုံးကို ပါးစပ်ထဲငုံထားရာကနေ ထိပ်ဖူးလေးကို လျှာနဲ့ဝိုက်ပြီးယက်တယ် ပြီးတော့ ထိပ်ဖူးလေးတင်ပဲ အသာလေးစုပ်ယူလိုက်တယ်။
စုပ်နေတုန်း သူ့လျှာက –
ရေးသူ – သီဟစော(အူးသီ) (မြကျွန်းညို မှကူးယူသည်)